Ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai maka ndị na-achọ ọrụ na UAE 🥇
Na-etinye aka na ụlọ ọrụ kachasị mma na Dubai ????
Dubai Jobs Recruitment & Career na Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Jikọọ otu ìgwè ndị ọrụ na Dubai
Ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai
Ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ na Dubai maka nke a, thislọ Ọrụ Dubai City, nwere otu ihe nwere ike inyere gị aka. N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị emepụtala email na adres zuru ezu ndepụta nke genlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ na Dubai, Ndị isi na Dubai na Abu Dhabi na ndị isi ụlọ ọrụ nchịkwa ndị na-enyocha na Gulf na Dubai. N'ọnọdụ ahụ, anyị na-agbalị ịnweta ọtụtụ nkọwa dịka anyị nwere ike site na onye ọ bụla na-enyocha na Middle East iji nyere gị aka inweta ọrụ na Middle East. Ụlọ ọrụ nchịkọta mmadụ na listi Dubai nke ụlọ ọrụ Dubai City Company ga-enyere gị aka inweta Dubai Job.
Ugbu a, anyị na-enyere ndị mmadụ aka inweta ekwentị site na ekwentị mkpanaaka maka ọrụ ntanetị. Anyị na ugbu a na-enyere aka inweta ọrụ ekwentị mkpanaaka site na India na Pakistan nakwa South Africa na Philippines. Dịka eziokwu, ịnwere ike ịdenye aha gị na ụlọ ọrụ anyị. Ma chọpụta nke ahụ ọrụ nrọ na United Arab Emirates. Kpee anya ma rụọ ọrụ nke ọma na CV gị wee ziga ya na ụlọ ọrụ anyị.
N'okpuru ọnọdụ ndị a na-enyere aka ugbu a ịchọta ọrụ na UAE. Karịsịa maka ọnọdụ dị iche iche n'ofe United Arab Emirates. Ewezuga ịchọ ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai. I kwesịkwara malite ịchọ ọrụ na njem na nyochaa na Dubai. N'ikpeazụ, tụlee ihe ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịnye gị.
Ndekọ zuru ezu nke nchịkọta Ụlọ ọrụ na Dubai
The Dubai City Ụlọ ọrụ na-eduzi ọrụ na UAE na ndepụta zuru ezu nke ndị na-akpọta na Dubai. Olileanya na ị ga-ahụ ọrụ na UAE. Karịsịa ya na ndepụta anyị zuru ezu nke ndị na-amanye ọrụ na United Arab Emirates. Na mkpokọta ị ga-enwe kọntaktị kpọmkwem. Zipu CV iji nweta ndị ọrụ na Dubai. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a, ị ga-akpa anya na ị bụ ụlọ ọrụ kacha elu. Anyị nwere Ebe a na-achọ ọrụ nlekọta Careerjet na Ndị a ma ama n'etiti ndị Indians a na-arụ ọrụ na Monster. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Zipu CV gị na ụlọ ọrụ ọfịs na Dubai.
Biko pịa na Icon iji gaa ndepụta zuru ezu !.
Top Recruiters na Dubai
Ụlọ ọrụ Dubai City mere nyocha banyere ndi oru ugwo. N'iburu nke a n'uche, anyị ahọrọla ndị ụlọ ọrụ kasị mma ndị na-akwụ ụgwọ na Middle East. Ị dị ka onye na-achọ ọrụ ọhụrụ kwesịrị ile anya ihe onye were oru kacha mma. Ya mere, lee anya otu ụlọ ọrụ nchịkwa kacha mma na United Arab Emirates. Olileanya ị ga-enweta nlezianya anya nke onye ọkachamara na-ahụ maka ndị ọkachamara.
N'ebe a, ị nwere ike izipu resume gị ma debanye aha gị!
Aha onye na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ: Njikọ ya na CV E-mail adreesị:
Ntughari Ntughari http://www.inspireselection.com/candidate/register.asp info@inspireselection.com
Nchịkọta ụwa http://globalrecuae.com/contact_us.php info@globalrecuae.com
Òtù Ndị Ọrụ https://www.manpowergroup.ae/en/job-opportunities info@manpower-me.com
Nchịkọta Cobalt https://www.cobaltrecruitment.com/candidates/register info@cobaltrecruitment.com
Njikwa Ụlọ http://www.lobomanagement.com/register.aspx lobo@lobomanagement.com
Ụlọ ụlọ https://www.charterhouseme.ae/jobs/submit-resume info@charterhouse.ae
Michael Page https://www.michaelpage.ae/submit-your-cv agammadleeast@michaelpage.ae
Isi Iyi https://hrsource.ae/join-us/ info@hrsource.ae
Kinney na-anakọta http://www.kinneyrecruiting.com/register/ ọrụ@kinneyrecruiting.com
Nbudata GoldBeck https://goldbeck.com/jobs-opportunities contact@goldbeck.com
nnu https://www.welovesalt.com/uae/jobs/ richard.smith@welovesalt.com
Ụlọ ọrụ nchịkọta ọrụ bụ 2
MCG na Co http://www.mcgand.co/job-board/ uae@mcgand.co
Taylor Mgbọrọgwụ http://www.taylorroot.com/cvupload.aspx izgigenc@taylorroot.com
TASC Outscorcing https://www.tascoutsourcing.com/register-cv/#/registercv ọrụ@tascoutsourcing.com
Na-abanye na Otu http://careers.reachgroup.ae/ INFO@REACHGROUP.AE
Òtù Ọgba Mmiri Gulf http://www.thegulfrecruitmentgroup.com/latest_job.php info@thegulfrecruitmentgroup.com
Switzerlandlinx Middle East Ltd. http://www.swisslinx.ae/en/europe/candidates/cv-registration dubai@swisslinx.com
BỤ https://www.pae.com/career/contact-recruiting ọrụ@pae.com
MRI UAE zuru ụwa ọnụ http://jobs.mrinetwork.com/?sref=MRINetwork%20Website info@mriwwuae.ae
Mbụ amalite http://www.firstresortrecruitment.com/candidates/ cvs@firstresortrecruitment.com
Ndị na-elekọta ndị ọrụ Sapphire Consultants DMCC http://sapphirerecruitment.ae/candidates/ info@sapphirerecruitment.ae
Nchịkọta ụwa https://db.grcfair.org/Logon.aspx info@grcfair.org
nọmba https://www.antal.com/register info@antal.com
Ngosipụta 2020 https://www.expo2020dubai.com/careers Enweghị email
Orbit ọrụ http://www.orbitstaffinginnovision.com/post-resume/ info@orbitsi.com
Ịbanye na Abc http://www.abcrecruitment.ae/browse-by-category ọrụ@abcrecruitment.ae
Star Ọrụ UAE http://www.starservicesuae.com/SSCareers/feStarService/Default.aspx info@starservicesuae.com
Isi ndị mmadụ http://www.peoplesource-me.com/services.php resume@peoplesource-me.com
Hanson Chọọ https://www.hansonsearch.com/login/ dubai@hansonsearch.com
S Ọrụ atọ https://www.sthreecareers.com/en/contact-us nlekọta-mei@sthree.com
Cooper Fitch https://www.cooperfitch.ae/recruitment okwutous@cooperfitch.ae
Ohr Mgbakọ https://ohrrecruitment.com/jobs/ info@ohrrecruitment.com
Nkuku Nkume https://www.cornerstone-group.com/contact/#consultant-search info@cornerstone-group.com
Gm nchịkọta https://www.gmrecruiting.com/users/register tinye@gmrecruiting.com
Ụlọ ọrụ nchịkọta ọrụ bụ 3
Nchịkwa Nchịkwa https://jobs.executivesolutionsme.com/en/job-search-results/ info@executivesolutionsme.com
Ntụgharị na-aga n'ihu https://www.progressiverecruitment.com/job-search prdubaiperm@progressiverecruitment.com
Mesa https://mesaar.com/company/mercans kae@mercans.com
Cd Cd http://www.maidcv.com/Signup_Pay customers@maidcv.com
Mbr mbanye http://mbrrecruitment.com/advertising-and-marketing/send-us-your-cv.php info@mbrworldwide.com
Njikwa Talent http://www.talentdubai.com/jobseeker_page.aspx info@talentdubai.com
Ọrụ Visage https://www.visage.jobs/diversity.html team@visage.jobs
Jikọọ Nnukwu Njikwa http://www.connectexecutivesearch.com/candidates/ info@connectexecutivesearch.com
Egwuregwu Egwuregwu http://www.oilexec.com/register.php info@oilexec.com
Ụlọ ọrụ na-ekpuchi Green https://www.greenrecruitmentcompany.com/users/register/new/registration info@greenrecruitmentcompany.com
Ndị ọkachamara nchịkọta http://www.expertsrecruitment.com/service.html cv@xpertsjobs.com
Osisi Erugoro http://www.therecruitmenttree.com/candidates/ info@therecruitmenttree.com
Ụlọ ọrụ Dubai City https://www.dubaicitycompany.com/upload-resume/ office@dubaicitycompany.com
Ógbè IPC http://www.icp-gulf.com/job-search/ recruit@icp-gulf.com
Mkpụrụ ụgbọ elu https://www.petroplan.com/login-register/ dubai@petroplan.com
Oké Osimiri Morpheus http://morpheusgulf.com/submit-resume/ dubai@morpheusgulf.com
N'ihi ya, gaa Dubai ahịa ọrụ ndị ọrụ nchịkọta na ndị ọrụ nlekọta ọrụ, Hays adịghị ka ọ bụla ọzọ onye ọrụ na onye ọrụ na UAE. N'okpuru ọnọdụ ndị a, Hays na UAE bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ iche iche. Ebe ha na-ahazi ọrụ ke Dubai maka Filipino ọpụpụ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ na-eweta ahụmahụ dị oke mkpa na Middle East na ihe niile ndị na-achọ ọrụ ga-erite uru na ya. N'iburu isi ihe ndị a, Hays nwere ọtụtụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị isi nchịkwa na UAE. Iji chịkọta ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ nke ọma na Middlesex University na Dubai.
Kpọtụrụ Hays Recruiter Agency na UAE
Na nke mbụ, ndị ọrụ etinyela vidiyo mgbasa ozi. N'oge na-adịghị anya Hays na Middle East ga-eme ka ị mara ihe ọ dị ka ọrụ na Dubai City Area. Ozugbo ị na-ezigara ndị ọrụ na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịchọta ịchọta ọrụ na ndụ na nyocha nke ọrụ. N'etiti Dubai ntinye ego, ụlọ ọrụ Hays amaala ndị na-achọ ọrụ n'ụwa na India, Pakistan, Europe, na US
N'akụkụ a, lee ihe mere Hays ụlọ ọrụ ji dị mma na mpaghara MENA. Tupu ị nweta onye kachasị mma na ndị na-ahụ maka ndị isi. Hays na-achọ ngwa ngwa maka talent ọhụrụ site n'ahịa mba. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ị kwesịrị ịnwa ịghọ akụkụ nke ìgwè Hays na UAE. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ka ha ga-anakọta ma jide n'aka na ị ga-enyerịta ndị nnọchiteanya nke Hays.
AKWỤKWỌ - Ụlọ ọrụ nchịkọta ọrụ na Dubai
Kpọọ: + 971 (0) 4 559 5800
BAC Middle East Ụlọ ọrụ nchịkọta na UAE
N'eziokwu na BAC Middle East bụ nke a ma ama na ụlọ ọrụ nchịkwa kachasị elu maka ndị ọkachamara na-ahụ maka ndị ọkachamara. O doro anya na nke a bụ n'uche, ụlọ ọrụ BAC na-ahụ maka ụlọ ọrụ na UAE bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kasị mma iji zipụ CV. Ihe ka ọtụtụ na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ bụ onye na-egwu egwu kachasị elu n'ime ụgbọ mmiris bụ na BAC e guzobere na ọtụtụ iri afọ gara aga na nke ahụ bụ 1979. N'akụkụ dị mma, BAC Middle East dị n'ozuzu ya ndị na-enyocha ọrụ n'ógbè UAE.
Dị iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ ọrụ BAC na-amaliteghachi nyocha ọrụ maka ihe karịrị afọ 30 na mpaghara MENA. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ghọrọ nke mbụ n'ime ụwa ndị nwetaworo akara ISO9001 kemgbe mmalite nke ọrụ. N'aka nke ọzọ, nke mbụ, na-eche na ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ Dubai weputa ogo kachasị mma na inweta ndị ahịa na UAE.
Ụlọ ọrụ BAC Maka ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai
Kpọọ: + 971 (0) 4 439 8500
ManpowerGroup Job na Dubai
Nyocha na ọrụ gbasara ọrụ
Karịa ndị niile na-amanye ọrụ na Dubai City ManpowerGroup ngwa ngwa ibu onye isi oru na UAE. Iji mepụta ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma ma malite usoro ịdenye aha ọhụrụ maka ngwọta nke ndị ọrụ ugbo na mba ụwa. Na olileanya na manpower ga - ejikọta ikike mmadụ na 2018-2019 gaa ahịa dị ike.
ManpowerGroup na-arụ n'otu oge nnukwu nnukwu na òtù dị iche iche gafee United Arab Emirates, Qatar, India, Canada na United States. Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ a na-agba akwụkwọ maka ụlọ ọrụ niile dị na UAE na maka ọrụ na Europe na Poland. Na-ekwu ihe ọ bụla banyere ụdị isi anọ na UAE. Onyinye ụlọ ọrụ ọrụ dị elu maka Dubai na Abu Dhabi ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, ihe ngwọta siri ike bụ ịghọ ọkachamara n'ahịa Manpower na ịchụ ezigbo ego.
Ebe ManpowerGroup na-arụ ọrụ
Na mbu, ManpowerGroup na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke n'ụwa nile. N'otu ụdị ahụ, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka otu ụlọ ọrụ nlekota ọrụ na mba 80. Ya na nghọta zuru ụwa ọnụ na ihe omuma banyere ahia ahia ndi UAE. Ọzọkwa na ihe karịrị 20 afọ ọkachamara na ahịa. ManpowerGroup ọzọ amalite inwe mmekorita na UAE. Maka ndị na-achọ ọrụ bụ ndị dị njikere ịkwalite ọrụ ha site na ịmaliteghachi na ManpowerGroup. N'ime 85% nke ndị na-achọ ọrụ na-ebuli àgwà nke ha ọrụ na-achọ UAE.
ManpowerGroup maka ọrụ na njikwa
N'iburu nke a n'uche, Manpower Group na-ebili na Dubai. N'elu ụlọ ọrụ ahụ dum biliri 35% arụmọrụ na ndi oru ndi oru ha na ndi oru ha. N'okpuru ọnọdụ ndị a, usoro ihe ọhụrụ nke ManpowerGroup gụnyere agụnye nbanye na nyocha nyocha na MBA maka ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ. N'ebe na-adịghị mma, ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ịmepụta na Qatar ma ọ bụghị ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Ma na ndị dị mma Manpower ka na-agbapụ ọrụ ọrụ maka ọrụ ọrụ na Abu Dhabi.
Kpọọ: + 971 (0) 4 391 0460
Robert Half Ọrụ UAE & Ịbanye na Dubai na Abu Dhabi
N'ezie otu n'ime ndị ọkachamara kachasị mma na Dubai na Abu Dhabi, iji gosi na ịchọta ọrụ na Dubai 2018. Na tinye maka ohere ọrụ na UAE. Ihe mbụ ị ga-echeta na ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa na ọnọdụ Abu Dhabi na ngwa ngwa. Na mma n'akụkụ chọta otu ọrụ nke dabara na ndụ gị. Na mkpokọta nwalere nkà gị pụrụ iche na ahụmịhe Middle East na Abu Dhabi Recruiter kachasị. Dika ihe atụ nke ezigbo onye ọrụ Robert Half na-emeghe ohere mgbe niile na weebụsaịtị ha na Top Forbes ụlọ ọrụ na Dubai na mpaghara Abu Dhabi. N'ikpeazụ ọrụ nyocha ọrụ na Robert Half echere ka ị were.
Ụlọ ọrụ nchịkwa na Dubai - Robert Half.
Kpọọ: + 971 (0) 4 325 9980
NADIA Abanye n'ọrụ na Dubai
Dị ka e kwuru na Nadia nbanye na-agba ọtụtụ cores na ebe nka n'ime ahịa na Dubai, Abu Dhabi, na Sharjah. Na nkenke nkenke, Nadia recruitment and management consultancy nwere nnukwu ọrụ dị na Dubai. Iji chịkọta ụlọ ọrụ ahụ ewulitewo ntụkwasị obi ndị ahịa na UAE. Maka karịa 30 afọ HR ọrụ na Dubai na n'ime oke asọmpi Ahịa obodo ndị Arab. Nchịkọta Nadia HR ụlọ ọrụ na-enye ọrụ elu ọrụ.
Obere obere ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ hiwere na 1983. Ruo ugbu a, nke a ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi ngwa ngwa ibu oru 4.70 site n'aka Google Jobs kachasi Ndi oru akwukwo ndi ozo na mpaghara Gulf.
Tinye na weebụ: http://nadia-me.com/candidate/index.cfm
Kpọọ: + 971 (0) 4 331 3959
Michael Page Nchịkọta na Ọrụ na Dubai
Na olileanya na ị ga - enweta Dubai Job, ndị na-eche echiche ịkwaga ebe ọzọ. Site na ebumnuche a maka gị na ezinụlọ gị bụ nnukwu mkpebi. Are bụ na-aga Dubai n'olileanya na mkpebi gị ziri ezi, maka nke a, họrọ ezi ụlọ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ị ga-eme mkpebi mgbe ị tụlechara nlezianya na nyocha nke ụlọ ọrụ nbanye na UAE.
n'ihi na Ulo oru Ubu Job abughi mfe na 2019. N'ebe na-adịghị mma tupu ị banye n'ime ebe ọhụrụ debanye aha na ndị na-akpọ ọrụ na Dubai. Ihe niile a ga-atụle ga-abụ maka gị mgbe ị na-enyeghachi ndị na-amụrụ ọrụ UAE ihe omume. Maịkel dị mma n'etiti Ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai.
Michael Page na mpaghara Middle East
N'ozuzu na-ekwu Michael Page na ihe nile ndi choro oru choro na UAE. Mụ na ụlọ ọrụ rụkọtara ọnụ iji nweta ozi dị mkpa. N'iburu n'uche nkọwa, Michael Page mgbe niile enyere ndị na-achụ nta n'ọrụ aka ka ha nwee ike ịkwaga ahịa nile nke Arab. Iji mesie ngalaba oru ndi oru n 'ulo oru Middle East mere ka ha nwee ike iweghari akwukwo iji nye ndi choro oru nghọta miri emi banyere ndụ ndị na-achọ ọrụ na UAE.
Ogologo oge ị na-eziga ha ka ha maliteghachi ma ọ bụ jikọọ na ha WhatsApp ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na mpaghara Middle East. N'iburu nke a n'uche, ị ga-ama otu esi aga Dubai maka ọrụ. Onye ọ bụla na-achọta ọrụ UAE nwere ike ịchọta ndụmọdụ gbasara azụmahịa na Dubai City. Tinyere ebe obibi na-enye aka na UAE, ụlọ ọrụ na ozi bara uru banyere ọrụ nkwado na Dubai, ụlọ akwụkwọ na ntụrụndụ maka ụmụ gị, otu esi mepee akaụntụ akụ Dubai na koodu ejiji dị mfe maka ibi na UAE.
Kpọọ: + 971 (0) 4 709 0300
Adecco Ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa
N'okwu a, ụlọ ọrụ Dubai City Company na-enye nchịkọta elu & ụlọ ọrụ ọrụ na GCC. N'ihu ndi ndu uwa na Ọrụ nchịkwa mmadụ na ọrụ ọrụ na Middle East. N'okpuru Adecco nyochaa ọrụ nyocha ọrụ, ndị na-achọpụta enyemaka maka ọrụ mba ha. Ruo n'oge ugbu a, e nwere karịa 14,000,000 debara aha ndị na-aga ime mgbanwe ndụ ha na UAE.
Ruo ogologo oge dị ka ị na-achọ elu maka ọrụ gị na Dubai n'egbughị oge, ị ga - ejikọta ya na Njikwa Ndị Ọrụ na Adecco ụlọ ọrụ. Site n'oge ruo n'oge, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ndị na-achụ nta achụmnta ego nwere ike iru ọrụ ndị ọrụ Pakistani tinye na saịtị Adecco. Ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ kachasị mma na Dubai, ọ dịghị ajụjụ a jụrụ. Maka nzube nke nyocha ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-enye gị ị nwere ike ịgbanwe ụwa gị. N'ihi nke a na Adecco, ị nwere ike imeziwanye ụzọ ndị mmadụ na-akwụ na UAE. Adecco bụ otu ndị kasị mma n'etiti ụlọ ọrụ nchịkwa na Mumbai.
Ọrụ Adecco na United Arab Emirates
N'eziokwu, Adecco na-enye ọrụ dị iche iche na-akwụ ụgwọ na Europe, Qatar, US, Canada, Asia. Na nzube a Adecco ejikọta ndị na-achụ nta na ndị na-amụrụ ọrụ. Icheghị ihe karịrị ndị 650,000 na-achọ ndị ọrụ na-ebuteghachi ndị ahịa a ụbọchị ọ bụla. Na mgbakwunye na ọrụ nnyefe nke ụlọ ọrụ Adecco na-enye ọtụtụ ụdị nke mkpara ebe ị nwere ike ịchọta Dubai Ọrụ. Naanị ịkọwaghị ọrụ ndị ọzọ dịka ntinye na-adịgide adịgide na Dubai, mgbanwe ọrụ site na India na Pakistan na UAE. Ọzọkwa, melite mmepe nkà n'ime ụlọ. A sị ka e kwuwe, otu ụlọ ọrụ bụ NO1 na ndị na-aga ịpụ apụ na Europe nyocha ọrụ na Saudi Arabia na UAE.
Ọrụ mmanụ & gas na Dubai.
Arụ ọrụ ọrụ engineering.
Ọkwọ ụgbọala na Uber Jobs na Dubai.
Ọrụ IT & Ọrụ na UAE.
Ọnọdụ FMCG & Ụlọ ahịa na Abu Dhabi.
Ego & nyochaa ọnọdụ na Qatar.
Kpọọ: + 971 (0) 4 368 7900
Robbert Murray Ndụmọdụ Job maka Ndị Nchọgharị Job International
Robbert Murray Top Recruitment Agency na UAE. Ọ bụghị naanị otu n'ime ndị kasị mma na Dubai ma ọ dịkwa ezigbo ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ. Robbert Murray maka ebumnuche nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a ma ama na-arụ ọrụ iji nweta ọkwa na mba. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, otu onye na-achọ ọrụ na-emepụta ọrụ ọrụ Dubai a nnukwu ọnụnọ dịpụrụ adịpụ na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, isi ụlọ ọrụ bụ inyere ndị na-eto eto ọhụrụ aka na UAE.
N'ikpeazụ, Robbert Murray bụ otu n'ime ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ dị na UAE na ị ga-edebanye aha na. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị jikọọ na nke a ị ga-akụ ihe ndị dị n'elu ụlọ ọrụ dị iche iche na Dubai na London. N'ikpeazụ, na ọ bụla ikpe ọ bụla ọrụ ohere bụ Qatar, Saudi Arabia, United Kingdom ma ọ bụ na gburugburu ụwa ziga CV ka Robbert Murray.
Robbert Murray ọrụ ụlọ ọrụ na ọrụ Dubai
N'iburu isi ihe ndị a, ụlọ ọrụ ahụ emepewo Linkedin zuru ezu Ngalaba n 'ugbo ala Middle East. N'ozuzu ha, ha dị na mpaghara dị iche iche gburugburu ụwa ka i wee nwee ike ịmeghe maka ọrụ zuru ụwa ọnụ. A ghaghị icheta na nchịkọta ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-etinye ha n'ime ọnọdụ zuru okè iji nyere ndị na-achụ nta ọrụ aka jikọọ ọnụ. N'ebe dị mma n'akụkụ isi okwu kwesịrị ekwesị na Dubai na-enyere ndị ọkachamara ndị ọzọ aka izute mkpa ha ma tinye ya na UAE.
Dị ka eziokwu, nke a ụlọ ọrụ na-enyere nwanyị ọpụpụ aka ịbanye na Dubai. Na ndị na-aga ime nke ọma kachasị mma ma rụọ ọrụ pụrụ iche n'etiti ụlọ ọrụ multination na-adabere na Middle East. Ruo na Robbert Murray ọrụ ụlọ ọrụ dị na Dubai na-akwụ ụgwọ kemgbe 1995 ma na-arụ ọrụ kacha mma maka mkpa ulo oru na Dubai City.
Kpọọ: + 971 (0) 4 381 7473
Ntughari Ntughari - Na-eduga Recruiter na Dubai, UAE
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na-ahọrọ nhọrọ bụ otu n'ime ihe kacha mma nchịkọta weebụsaịtị na ụlọ ọrụ na Dubai. N'aka nke ọzọ maka nzube nke nchịkọta. Nzukọ Nhọrọ Mgbasa Ozi na UAE na-enyere aka na 3,000,000 ndị ahịa na-azụ ahịa ịchọta ọrụ na UAE. N'olile anya na ndị ọzọ ga-enwetakwu enyemaka ga-enyere ha aka na ohere ọrụ na saịtị ahụ na Dubai. N'ihi oru ahia na Middle East, ọ dịghị mfe anyị gbakwunyere nke a UAE ọrụ n 'ọrụ iji nyere ndị na-achọ ọrụ Dubai aka inweta ọrụ ngwa ngwa.
Maka ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai - Nchọpụta Ọhụụ.
Kpọọ: + 971 (0) 4 368 0852
Randstad Nchịkọta ọrụ na Ọrụ Nchịkwa Mmadụ maka Middle East
Ụlọ ọrụ nchịkọta na Dubai Iji bụrụ ụlọ ọrụ kachasị mma na MENA. Randstad na-arịgo n'elu UAE ụlọ ọrụ na-azụ ahịa. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ kere ụlọ ọrụ kacha mma maka ndị India n'ụwa. N'ebe dị mma ịchọta ọrụ na Randstad, ọ dị mfe. Ugboro ugboro emetụtara ebe nrụọrụ weebụ jupụtara na oke ndị ọkachamara ọkachamara n'ịbanye n'ọrụ.
Kwe ka ndị na-arụ ọrụ na Dubai gaa rụọ ọrụ na ọrụ ha na-achọ na Middle East. Ihe ọzọ dị mkpa na Randstad ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịghọ onye nchịkọta. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ na-enye ọrụ na-akwụ ụgwọ na Gọọmentị ụlọ ọrụ ntinye ego ọ bụghị nanị na United Arab Emirates. Iji chịkọta ị nwere ike ijide ọrụ ọrụ gị. Na-arụ ọrụ ahịa mba ụwa ma tinye maka nnọchite ọrụ na Randstad HR ụlọ ọrụ.
Ihe banyere Randstad Mena Recruitment
N'ọnọdụ ọ bụla, a maara Randstad MENA n'akụkụ ya Ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai. Na otu n'ime ụlọ ọrụ kasị mma na UAE. N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị amaghị na Randstad Holding bụ azụmahịa $ 28.3. Ijeghari ụlọ ọrụ kere ọrụ kachasị mma na HR na afọ iris. Ruo ugbu a Randstad na-aga n'ihu ụzọ pụrụ iche maka South Africa na-aga ime na Dubai City. Iji malite, isi ahịa azụmahịa na ọrụ ndị mmadụ bụ Randstad kacha mma ntinye ohuru maka ndi oru ugbo mba. N'oge na-adịghị anya, ị ga-ahụ ụlọ ọrụ Randstad n'Ịntanet. Ka ọ dị ugbu a, ịnwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'ihu oge n'egbughị oge ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eme ihe na ndị ọrụ ego na United Arab Emirates.
Ụlọ ọrụ nchịkwa ANOC niile na mberede, ọ bụghị naanị ọrụ nchịkọta dị mfe. Njikọ ụlọ ọrụ ga-emesị bụrụ ịmepụta ọrụ ọrụ mba niile maka ndị na-achọ ọrụ. ANOC nwere alaka 4 na Dubai ebe ị nwere ike ịbanye na ị nwere ike ịrụ ọrụ na ọ dịkarịa ala na-ekwu okwu ihu na ihu na ndị ọrụ nchịkọta. Iji malite ihe a dị ịtụnanya biko biko debanye aha ma ọ bụ kpọọ ANOC.
Ebe ọ bụ na ị na-ezigaghachi na oge onye nlekọta ụlọ ga-ele anya na mmalite gị. N'ikpeazụ, ị nwere ike belata oge nke ọrụ siri ike ị na-achọ site na igosi talent gị na ihe ịga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ANOC. N'elu ala ụlọ ọrụ na-achịkwa ezigbo ọrụ maka ndị na-achụ nta ụwa ebe ha nwere ike iji ikpo okwu jikọta ndị ga-abụ ndị ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ọrụ a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ dị mma na Dubai.
Jerry Varghese Ọrụ nke Mba
Ọrụ Ụlọ Ọrụ International nke Jerry Varghese Ngwọta maka ndị na-achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Nwee anya ndị si India na-enyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ.
Ọrụ na Dubai na Jerry Varghese International Careers. Ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ndị kasị mma n'etiti ndị nchịkọta. Iji kwu eziokwu, Jerry Varghese bụ otu n'ime ndị isi ọrụ nchịkwa n'ime ọrụ nchịkọta ndị ọkachamara maka ngwongwo. Jikọtara ọnọdụ kachasị elu. Jerry Varghese bụ ndị ọkachamara kachasị elu na nke kachasị elu. N'aka nke ọzọ, nke ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ọrụ zuru ezu ma zuru oke na Ọwara.
N'otu oge ahụ mgbe ị na-eji Jerry Varghese International Careers. N'ezie, ha na-enye ego-irè ụlọ ahịa dị na Dubai. Isi ihe ọzọ ị ga - arụ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na ọrụ gọọmentị. Ihe mbụ ị ga-echeta ụlọ ọrụ ahụ enwe ike dị na Middle East na ha na-arụ ọrụ maka ihe karịrị 30 afọ. N'ebe dị mma mgbe ị na-eme nchọpụta ọrụ na ụlọ ọrụ a. Ị nwere ike ịtụ anya ọrụ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ Gulf kamakwa na zuru ụwa ọnụ.
Maka afọ 25 ikpeazụ, Jerry Varghese enyere ndị na-achọ ọrụ. Ikwu okwu n'ozuzu si n'akụkụ ụwa nile ma nke gụnyere India na Pakistan. Ihe ka ukwuu na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ihe kacha mma. Ọ bụ ha na-arụ ọrụ na ụzụ ụwa ahịa mara na Middle East.
N'ihi nke a, anyị na-agbalị ịmebata ụlọ ọrụ ahụ gị. Dị ka egosipụtara na nghọta nke ụlọ ọrụ ahụ nke ọma n'ọgba ahịa. Ka o sina dị, ọrụ ịchọ ha bụ ezigbo nhọrọ. Kwa onye na-achọ ọrụ ọhụrụ na-eche nsogbu ihu site na ịchọ ọrụ na ndụ na GCC.
Ụlọ ọrụ Dubai City Ọrụ na ọrụ ịchọrọ ịchọta Dubai
Ka ọ dịgodị, ọ dịkwa anyị mkpa ịkwalite ụlọ ọrụ anyị. N'egbughị oge, ị nwere ike ịchọta ọrụ na Dubai. Ozugbo a, ịkwesịrị ịkwalite resume na nchekwa data anyị. Ebe ọ bụ na 2016 gbasara ndị na-enyocha ọrụ na 350,000 na-aga n'ihu na profaịlụ mgbasa ozi. Maka nzube nke itinye ndị na-aga ime na Dubai, anyị kere n'ezie otu n'ime usoro kachasị mma iji nweta ọrụ na Dubai.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ndị ọrụ nchịkọta anyị bụ ndị ọkachamara na ihe nlekota oru nke Dubai Jobs. Ọ dị anyị mkpa mgbe niile ijide n'aka na ndị na-eme anyị ga-abụ ndị ọrụ na oge, na-adịru nwa oge, oge zuru oke ma ọ bụ oge oge na Oil & Gas, Marketing na Sales, Nnyocha maka Ụlọ Ahịa na Dubai, Medical, Akaụntụ, Banking na Finance, Engineering na Manufacturing ndi ke Middle East.
Ihe kacha mma na-emepụta ọrụ na Dubai
Maka nzube nke Achọpụta ego maka ọrụ ego na Dubai. Ụlọ ọrụ anyị dị iche na ndị ọzọ. Dị mkpa ịmara na site na ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike nweta ọrụ na UAE 5x ngwa ngwa tụnyere ụlọ ọrụ ọ bụla. Ị ga-akwụ naanị $ 5 maka ndebanye aha. Ma maka egwu na ị ga-atụfu ego anyị na - enye 100% nkwụghachi. N'oge na-adịghị anya ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ nyocha ọrụ anyị ịchọta ọrụ na Dubai. Ruo ugbu a, anyị etinyela 80,000 ndị na-achọ ọrụ na UAE. N'ikpeazụ, anyị na-achọ ile 20,000 ọzọ na 2018.
Kpọọ: + 48 (0) 536 003 117
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a inye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.
* Gosi Onwe Gị Onye Ndị Ọrụ E Dere Edemede + can nwere ike idetuo na mado CV ebe a!
Kpeme Onwe Gị n'thezọ Ziri Ezi! You nwere ike itinye CV ebe a! - (Ctrl + C, Ctrl + V)*
Aha mgbasa ozi WhatsApp & Number WhatsApp*